अभिलेख - बढ्दो मोबाइलको प्रयोगले पुस्तकालयमा पढ्न जाने पाठकको सङ्ख्या घट्दै - page 3
बढ्दो मोबाइलको प्रयोगले पुस्तकालयमा पढ्न जाने पाठकको सङ्ख्या घट्दै
रासस / बासुदेव पौडेल पोखरा । बढ्दो मोबाइलको प्रयोग र पठन संस्कृतिको कमीले पुस्तकालयमा पढ्न जाने पाठकको सङ्ख्या घट्दै गएको छ । प्रविधिका कारण जुनसुकै स्थान विशेषमा नै आवश्यक पर्ने पाठ्यवस्तु मोबाइलमा प्राप्त गर्ने क्रमसँगै दिनानुदिन युवा पुस्तामा देखिएको पठन संस्कृतिको हसका कारण पुस्तकालयमा गरिएको लगानीको अपेक्षित उपयोग हुनसकेको छैन । नेपालमा औपचारिक पुस्तकालय स्थापना प्रारम्भ गरेको दुई शताब्दी पार भइसके पनि राज्यले समेत पुस्तकालय क्षेत्रलाई अझै प्राथमिकतामा राख्न नसकेको सरोकारवाला बताउँछन् ।	थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास बिम्स्टेकको चौथो शिखर सम्मेलनले नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने विश्वास लिइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सभासम्मेलनले नेपालको प्रचारप्रसारमा समेत महत्वपूर्ण योगदान गर्ने जनाउँदै यस क्षेत्रमा काम गर्दै आएका सङ्घसंस्थाले पर्यटन प्रवद्र्धन हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । दक्षिण एशियाका पाँच र दक्षिणपूर्वी एशियाका दुई देशको साझा संस्था बिम्स्टेक क्षेत्रीय सहयोग प्रवद्र्धन तथा साझेदारीलाई सफलतापूर्वक अघि बढाउने माध्यम बन्न सक्छ ।	थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । ‘स्थानीय जनता नै स्मारकका अभिभावक हुने भएकाले क्षतिग्रस्त स्मारकहरुको पुनःनिर्माण एवं जीर्णोद्धारसम्बन्धी कार्यका विभिन्न चरणमा उनीहरुको सहभागिता सुनिश्चित गरिनेछ ।’ भूकम्पले क्षति पु¥याएका सम्पदाहरुको संरक्षण एवम् पुनःनिर्माणसम्बन्धी आधारभूत निर्देशिका–२०७२ को बुँदा नं १३ मा उल्लेख गरिएको यो वाक्यांश अनुसार काम भएको भए सम्पदाप्रति नयाँ पुस्ताको अपनत्व बढ्ने थियो । तर व्यवहारमा यसको अभ्यास भएन । यो व्यवस्था कागजमा देखाउनकै लागि गरिएको जस्तो लाग्छ ।	थप पढ्नुहोस्
दलित समुदायका नगर प्रमुख भन्छन् ‘घृणा हैन, अहिले कदर गर्छन्’
वीरेन्द्रनगर । केही वर्षअघिसम्म दुई–चार जनाको जमातमा उभिएर बोल्न उहाँलाई संकोच लाग्थ्यो । महिला, त्यसमा पनि दलित समुदायको । बोल्दा गलत भइहाल्ने हो कि भन्ने चिन्ता उनलाई भइरहन्थ्यो । एक वर्षयतादेखि उनले कार्यपालिका सदस्य भएर सिंगो नगरपालिका नै हाँकि रहेको छ । नगरका मुख्य योजना बनाउने काममा पनि अग्रपंक्तिमै हुनुहुन्छ उनी । गुर्भाकोट नगरपालिकाको कार्यपालिका सदस्य हुनुभएपछि पैंतीस वर्षीया सरस्वती नेपाली अहिले ढुक्कसँग बोल्न मात्र होइन सजिलैसँग सभामा पनि आफ्ना विचार राख्न सक्छन् । अहिले उहाँको हस्ताक्षर बिना योजना नै बन्दैन ।	थप पढ्नुहोस्
भद्रपुर । सात सालको जनक्रान्ति सफल भएपछि पूर्वी नेपालमा गठित पहिलो जनसरकारले २००८ सालमा स्थापना गरेको भद्रपुर पुस्तकालय विगतमा चर्चित रहे पनि अहिले गुमनाम छ । ऐतिहासिक महत्व बोकेको ६७ वर्ष पुरानो झापाको यो पुस्तकालय विगत दुई दशक यता पाठकविहीन अवस्थामा छ । “पढ्न भनेर कोही आउँदैनन्, सरकारले समेत यसको संरक्षण र सञ्चालनमा कुनै ध्यान दिएको छैन” – भद्रपुरबाट प्रकाशित नौलो आवाज पत्रिकाका सम्पादक दीपक अधिकारी भन्छन् । पश्चिम झापाको गौरीगञ्जमा २०११ सालमा स्थापना भएको अर्को ऐतिहासिक महत्वको त्रिभुवन आदर्श पुस्तकालयसमेत पाठक गुमाएर संकटबाट गुज्रिरहेको छ ।	थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । सरकारले ग्रामीण समुदायको जीवनस्तर उकास्नका लागि ३६ हजार ३०३ वटा नयाँ लघु, घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता गरेको छ । आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रुपमा रहेको लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको विकासका लागि सरकारले आव २०७४/७५ मा सो सङ्ख्यामा नयाँ उद्योग दर्ता गरेको हो । दर्ता भएका नयाँ उद्योगमध्ये घरेलु तथा साना उद्योग विभागमा २२ हजार ६६६ र लघु, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिमा १३ हजार ६३७ उद्योग दर्ता भएका हुन् ।	थप पढ्नुहोस्
सञ्चारको साधन हुलाक सेवा प्रविधिमैत्री बन्दै
ललितपुर । कुनै समयमा सबैभन्दा बढी प्रयोगमा आएको सञ्चारको साधन हुलाक सेवा अहिले छिटो र प्रविधिमैत्री बन्न थालेको छ । सेवाग्राहीलाई छिट्टो र गुणस्तरीय सेवा दिनका लागि हुलाक सेवाले आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरेर सो सेवा दिन थालेको हो । कुनै पनि सेवाग्राहीले आफ्नो पत्र आएनआएको र नआइपुगे कुन ठाउँमा अल्झिएको छ भन्ने जानकारी पाउन सक्ने जिल्ला हुलाक कार्यालयकी प्रमुख बिमला कार्कीले बताए। उनले भने, “अहिले प्रविधिको समय भएको र सेवाग्राहीले पनि छिटै सेवा चाहने भएकाले आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरिएको छ ।	थप पढ्नुहोस्
सार्क ‘दालभात’ र बिमस्टेक !
काठमाडौं । दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन 'सार्क' को सन् १९९१ मा श्रीलङ्कामा सम्पन्न छैटौँ शिखर सम्मेलनले पारित गरेको कोलम्बो घोषणापत्रको बुँदा नं १७ मा सार्क क्षेत्रका नागरिकले कम्तीमा पनि दालभात खान पाउनुपर्ने कुरामा जोड दिइएको थियो । ‘दालभात’ गरीबी निवारण गर्ने प्रयासमा सार्क क्षेत्रीय मञ्चको एक प्रतीकात्मक प्रस्तुति पनि हो । सार्क क्षेत्रका नागरिकले कम्तीमा पनि दालभात खान पाउनुपर्ने विषयलाई उनीहरुको आधारभूत तथा नैसर्गिक अधिकारका रुपमा सो घोषणापत्रमा प्रस्तुत गरिएको छ । दालभात यस क्षेत्रका नागरिकको साझा खाना हो ।	थप पढ्नुहोस्
द्वन्द्वकालमा पार्टीको झण्डा बनाए, अहिले साइनबोर्ड !
बैतडी । दश वर्ष लामो सशस्त्र संघर्षका बेला उनले झण्डा, तुुल, ब्यानर बनाउँदै हिँडे, वाल पेन्टिङ गरे । जानेको सीप त्यही थियो । अहिले उनी यही पेशाबाट जीवन धान्छन् र यस पेशाबाट आर्जित पैसाबाट समाज सेवा गर्ने पवित्र सोच राख्छन् । द्वन्द्वकालमा भूमिगत भएर क्रान्तिमा होमिएका बैतडी दोगडाकेदार गाउँपालिका ३ श्रीकोटका जनक बहादुर चन्दलाई अक्षर लेख्ने र कुची, रङ्ग र ब्रससँग खेल्ने काम नै रमाइलो लाग्छ । तत्कालीन माओवादी पार्टीभित्र पनि चित्रकलाकै काम गरेका ३६ वर्षीय युवक जनकले हिजोआज अक्षर लेखेर मासिक ३० हजार रुपैयाँ कमाउँछन् ।	थप पढ्नुहोस्
बागलुङ । आधुनिक प्रविधि भित्रिनु अघि मुलुकका विकट गाउँ र वस्ती जोड्न स्थानीय सीप र साधन प्रयोग गरेर झोलुङ्गे पुल बनाइन्थ्यो । स्थानीय कालिगढहरुलाई पुल बनाउने जिम्मा दिइन्थ्यो । तर, अहिले नयाँ प्रविधिले त्यसको ठाउँ लिइसक्यो । रैथाने सीपमै आधारित परम्परागत शैलीका यस्ता पुल अहिले देख्न मात्रै पाइन्छ । धेरै पुल जीर्ण भइसकेका छन् । अब त यस्ता पुल बनाउने कुशल कालिगढहरु भेट्टाउनै पनि मुश्किल भैसकेको छ । स्थानीय कालिगढ र सीपलाई नयाँ प्रविधिले झण्डै झण्डै विस्थापन गरिसकेको छ । नेपालमा नयाँ प्रविधिको झोलुङ्गे पुल बन्न लागेको १३ वर्ष जति भयो ।	थप पढ्नुहोस्